Iinwele zamadoda zakudala kunye nokusikeka - uKhathalelo lwaMadoda oluSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Njengokuba iminyaka ihamba kwaye iindlela ziqalekisa isitayile sakho kwizinwele, ngaphandle kwamathandabuzo asinakushiya ecaleni ukusika kweklasikhi. Bahlala besebenza kwaye kukho amadoda awasebenzisela ukuhomba kwabo, kuba uninzi ikwangumqondiso wobuhle.
Kufuneka sizihlele ezi ndidi zimbini zamadoda ezikhetha enye iinwele kunenye. Si i-avant-garde abakhetha ukwamkela iinwele ngokusekwe kwinto abayinxibayo, ngaphandle koloyiko lwefashoni. Kwaye zikhona ezesiko, abo babheja ngokukhuselekileyo kuhlobo lweenwele zakudala, eziza kubanika isiqinisekiso.
1 Iinwele zakudala
1.1 Isikere esinqumle sokucheba iinwele
1.2 Icala lokwahlula iinwele
1.3 Iinwele zeToupee
1.4 Iinwele ezingaphantsi
1.5 Ukuchetywa okusikiweyo
1.6 Ukucheba okanye ukucheba iinwele
Ukusikwa kwesiko bekusoloko kubakho ukusukela ebuntwaneni. Ngabo babonakalise isimbo kunye nobuntu bendoda nganye kunye neenwele ezithe zahlala ubomi babo bonke. Ukuba ufuna ukwazi uninzi lweendlela ezikhethwa ngabantu abanesitayile, unokufunda ngakumbi ngakumbi kwezi sikunika zona eli candelo. Apha sicebisa ukuba ulungise iinwele ngokusika okuqhelekileyo:
Isikere esinqumle sokucheba iinwele
Luhlobo lokusikwa esele yenziwe kwizizukulwana ezininzi. Ukugqiba ayimde kakhulu okanye imfutshane kakhulu, kunye nenxalenye ephezulu ixesha elide kunezinye iinwele. Amacala entloko awanqunyulwa mfutshane, kodwa kunoko ngokukhululekileyo kwaye ngokwendalo, ukuze bakwazi ukunqunyulwa kwakhona.
Ukugcinwa kwayo ayifuni mgudu ungako, Kuya kufuneka uyikame ngekama okanye ngebrashi ukuyigcina isitayile kwaye ngaphandle kokuphinda ubambe kwakhona. Ukuba ufuna ukwenza uphawu oluncinci ungasasaza i-wax encinci, i-matte gel okanye i-foam, okanye ngokufaka isixa esincinci samanzi.
Icala lokwahlula iinwele
Yinto yakudala kuzo zonke izizukulwana, oyibonileyo ngokuqinisekileyo kubazali noomakhulu nootatomkhulu kwiifoto zabo ebutsheni babo. Nika i- ukuchukumisa okunzulu kunye nobunzulu, yemeko yokusebenza kunye nokwenza ifayile ukusika okulula, okucocekileyo nokunonophelo. Inokwenziwa nge-toupee encinci kunye nokwahlula-hlula ecaleni, luhlobo lweklasikhi esikiweyo phakathi kweeklasikhi kwaye ihlala ihamba kakuhle kubume bobuso obuninzi.
Ukusikwa kwayo kunokuba ngcono ngakumbi kubuso obungenakho ukubonakala, obunemilo ejikelezileyo kunye nebunzi elikhulu. Ukwahlula okuthe tye kuya kunika ukusika ngqo kulwakhiwo lobuso. Ubume bayo buza nokusikwa kumacala kuthotywe kakuhle kwaye icandelo eliphezulu ixesha elide. Xa ikama inokulungiswa nge-wax okanye ngokulungisa i-lacquer.
Oku kunqunyulwa kukudala kwaye kungoku. Iimpawu zayo ziinwele ezisezantsi kancinci emacaleni entloko kunye nokuthinta phezulu, kodwa ngaphandle kokuyithoba ngaphandle kokuqhubela phambili. Kufuneka ube neenwele ezinde ukuze wenze ubume be-toupee, okanye nge itoupee edityanisiweyo okanye ebrashiweyo umva, kodwa ngaphandle kokususa ivolumu.
Kuyacetyiswa kobo buso ngobuso bobuso ngomhlathi obanzi okanye ongunxantathu, okoko imilo yeqela iya kunceda ekulweni isiphumo kunye nokwenza umlinganiso olungileyo wobuso. Ukuba unayo iinwele ezomeleleyo, ezingqindilili nezinevolumu Oku kunqunyulwa kuya kujongeka kuhle kuwe. Ukuyigcina kwindawo yayo efanelekileyo kunye neeyure, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe into elungileyo, eyomeleleyo yokubamba iinwele, ngokuchasene nokufuma kunye nefuthe lokomisa ngokukhawuleza.
Nokuba ungaluphi uhlobo lweenwele onazo, le iinwele ilungele iinwele ezigobileyo okanye ezithe nkqo. Ukusikwa kwayo kuchetyiwe kakhulu emacaleni kwaye umphezulu wentloko kufuneka ube mde kakhulu, eyona nto ilungileyo ziisentimitha ezisixhenxe. Yinwele yokuyila kunye Injongo yakho kukwenza umahluko omkhulu, ke ukuba ungumntu ozimiseleyo ayikufaneli. Ukuba unobuso obusisikwere, enemihlathi ephawulwe kakhulu kunye ne-cheekbones, oku kunqunyulwa kweenwele kuya kuba kuhle, njengoko kuya kuthambisa kwaye kuphule ukuqina kwefom.
Kukusikwa kweklasikhi kunye nemveli apho amadoda sele ekhetha olu hlobo lokutsheva xa bephulukana neenwele kwaye bafuna ukuzifihla ngendlela ethile. Abanye abanakukufihla ukukhululeka okuvela kukungazi ngokudibanisa iinwele zabo yonke imihla okanye kubushushu iinwele ezinokubunika ixesha elide ehlotyeni. Kungenxa yoko le nto bekhetha ukuthatha i-razor kwaye bayishiye phantse ku-0, kodwa ngenxa yoku kufuneka kuqatshelwe ukuba oku kunqunyulwa kufuneka kucace ebusweni.
Ukucheba okanye ukucheba iinwele
Le nwele ine-edityanisiweyo eyakhiwe, apho iinwele zilinganayo macala omabini nangaphezulu. Ukucheba kwayo kulungele iinwele ezigobileyo, iinwele ezomeleleyo okanye iinwele ezinamaza amancinci. Umxholo olungileyo kukuzisa ukwenziwa okuhambelanayo okanye ugqibe ukuthoba isandi.
Imfihlo kukusika iileya kwaye yenza kwezinye iimeko ivolumu engafakwanga, kodwa ngesiphumo esisigxina, ikakhulu ngaphambili. Oku kunqunyulwa kulungele ubuso obuxande okanye ubuso obubukhali okanye obude obude, apho umphumo uya kudala ivolumu ebusweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iinwele zakudala kunye nokusikwa kwamadoda
Itekhnoloji yakutshanje kwizixhobo zesithuthuthu